टुथपेष्ट र चिनीको चमत्कारीक काम : यसरी घरमै गर्भ जाँच्ने यो घरेलु विधि ! जानी राखौ « Onlinetvnepal.com
Published : 12 April, 2019 10:45 am
नेपाल जस्तो देशमा नियोजित कम र अप्रत्यासित गर्भ बढि रहन्छ । बिना योजना वा भनौ नचाहादा–नचाहादै रहेको गर्भले दम्पतिमा तनाव पैदा गर्छ । यो तनाव अब घरेलु विधिबाटै घरमै बसेर हल गर्न सकिन्छ । फेरी ग्रामिण भेगमा नचाहाँदा नचाहाँदै बसेको गर्व थाहा पाउन घण्टौ या दिन खर्च गरेर सहरमा आउनुपर्छ तर गाँउमा तपाईआफुसँग भएको घरेलु समानबाटै गर्भको परिक्षण गर्न सक्नुहुन्छ । न चाहिन्छ चिकित्सक न चाहिन्छ कुनै किट ।
चिनीबाट पनि यहि विधी अपनाएर गर्भ रहेरनरहेको परीक्षण गर्न सकिन्छ । चिनीमा थोरै पिसाब मिसाइदिने । केहि समयपछि चिनी घुलिनुको साटो डल्ला पर्न सक्छ । यदि त्यस्तो भयो भने तपाईमा गर्भ रहेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । यदि चिनी र पिसाब आपसमा घुल्छ भने तपाईमा गर्भ रहेको छैन । घरमा साबुनबाट पनि तपाई प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि साबुन र पिसाब कुनै डिस्पोजलमा मिसाउनुपर्छ । केहि समयपछि साबुनमा स–सना फोकाहरु बन्यो भने तपाई गर्भवती हुनुभयो ।
गर्भ राख्न कुन समय उपयुक्त
विवाह भएको केही महिनामै साथीसँगी तथा आफन्तजनको प्रश्न आइरिन थाल्छन्, खुसीको खबर कहिले सुन्न पाइन्छ ? उता दम्पतीको ताक अर्कै हुन्छ । पहिले करिअर निर्माण अनि मात्र फेमेली प्लानिङ । हिजोआजका विवाहित जोडीहरू योजना बनाएर मात्र शिशुलाई धर्तीमा पदार्पण गराउँछन् ।
उनीहरूबीच यति महिनापछि, यति वर्षपछि मात्र सन्तान ट्राइ गर्ने भनेर योजना बनेको हुन्छ । यद्यपि गर्भवती हुन सोचेजस्तो सहज नहुनसक्छ । कसैलाई एउटै प्रयासमा गर्भ रहनसक्छ भने कसैलाई महिनौं प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्भवती हुनका सेक्स गर्नु जति जरुरी छ उति नै कसरी र कहिले सेक्स गर्दा गर्भ रहन्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनु आवश्यक छ । यी कुरालाई बेवास्ता गर्दा गर्भ नरहनसक्छ ।
धेरैजसो दम्पतीलाई गर्भ रहनका लागि कुन समय सेक्स गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको पाइयो । सेक्सको समय सही भयो भने गर्भ बस्न कठिनाइ हुँदैन । गर्भ धारणका लागि कति पटक र कसरी सेक्स गर्ने भन्ने जानकारी भयो भने महिनौं कोसिस गर्नु पर्दैन ।
आफ्नो योजनाअनुरूप सहजै गर्भधारण गर्न सकिन्छ । दम्पतीलाई यस्तो कुराको जानकारी नभएको स्थितिमा समस्या समेत सिर्जना हुनसक्छ । उसो भए गर्भधारणका लागि कुन बेला, कति पटक र कसरी सेक्स गर्ने त ? जब पुरुष प्रजनन कोष ‘शुक्रकीट’ को महिलाको गर्भाशयमा अवस्थित अण्डसँग मेल भएर त्यसलाई फर्टिलाइज गर्छ तब मात्र कुनै पनि महिला गर्भवती हुन्छिन् ।